ကိုဗစ်ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးသောက်ဆေး Molnupiravir ကို အိန္ဒိယ ဆေးဆိုင်များတွင် ရရှိနိုင်ပြီ - Xinhua News Agency
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း ထရီပူရပြည်နယ် မြို့တော် Agartala မြို့၌ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ရေး ဆောင်ရွက်ချက်အဖြစ် နိုင်ငံတစ်ဝန်းလော့ခ်ဒေါင်း (lockdown) သတ်မှတ်ထားစဉ် ဈေးအတွင်း ဝင်ရောက်မည့်သူများအား ကိုယ်အပူချိန်တိုင်းရန် စောင့်ဆိုင်နေသူများအား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလက တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ- Str/Xinhua)
မွမ်ဘိုင်း၊ ဇန်နဝါရီ ၅ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အိန္ဒိယကုမ္ပဏီများက ကိုဗစ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးဆေး Molnupiravir ကို ဆေးတစ်တောင့်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၀.၅ ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားကြောင်းနှင့် လာမည့် သီတင်းပတ်မှစ၍ နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ လက်လီဆေးဆိုင်များတွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အိန္ဒိယ ဆေးဝါးကုမ္ပဏီ Dr. Reddy’s Laboratories နှင့် Mankind Pharma တို့က ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
ငါးရက်စာ ဆေးတောင့် ၄၀ အတွက် စုစုပေါင်း ဆေးကုသမှုစရိတ်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၈.၈ ကျသင့်မည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကိုဗစ်-၁၉ (COVID-19) လူနာများအတွက် ဈေးနှုန်းအသင့်တင့်ဆုံး ဆေးကုသရေးရွေးချယ်မှု ဖြစ်လာဖွယ်ရှိကြောင်း ကုမ္ပဏီများက ပြောခဲ့သည်။
ယမန်နှစ်က Dr. Reddy’s သည် Molnupiravir ဆေးအား ထုတ်လုပ်ရန်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် ဝင်ငွေ နည်းပါးနှင့် အလယ်အလတ်ရှိသော နိုင်ငံနှင့် ဒေသ ၁၀၀ ထံသို့ ပံ့ပိုးရန် Merck Sharpe Dohme (MSD) နှင့် မိမိဆန္ဒအလျှောက် သီးသန့်လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုသဘောတူညီချက်အတွင်း ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။
ထို့ပြင် Cipla and Sun Pharmaceutical တို့ အပါအဝင် အခြားအိန္ဒိယဆေးကုမ္ပဏီများသည် သောက်ဆေး (oral anti-viral drug) အား ရောဂါအခြေအနေဆိုးဝါးနိုင်ဖွယ်ရှိသော ရောဂါလက္ခဏာမပြင်းထန်သူများနှင့် အလယ်အလတ်ရှိသော ကိုဗစ်-၁၉ လူနာများအား ဆေးကုသရန် မိတ်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါအရေအတွက်သည် လွန်ခဲ့သည့် ၂၄ နာရီအတွင်း အတည်ပြုလူနာအသစ် ၃၇,၃၇၉ ဦးရှိခဲ့ရာ စုစုပေါင်း ရောဂါဖြစ်ပွားသူ ၃၄,၉၆၀,၂၆၁ ဦးအထိ မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ နောက်ဆုံးရအချက်အလက်များအရ သိရသည်။ (Xinhua)
MUMBAI, Jan.4(Xinhua) — Indian companies have priced anti-COVID drug Molnupiravir at 0.5 U.S. dollars per capsule and will be available across retail pharmacies across the country from next week, Indian pharmaceutical companies Dr. Reddy’s Laboratories and Mankind Pharma said Tuesday.
Last year, Dr. Reddy’s entered intoanon-exclusive voluntary licensing agreement with Merck Sharpe Dohme (MSD) to manufacture and supply Molnupiravir to India and over 100 low and middle-income countries and regions.
India’s COVID-19 tally rose to 34,960,261 on Tuesday, with 37,379 new confirmed cases registered in the past 24 hours in the South Asian country, showed latest data from the federal health ministry. Enditem
Photo : People line up to check body temperature before enteringamarket duringagovernment-imposed nationwide lockdown asapreventive measure against COVID-19 in Agartala, the capital city of India’s northeastern state of Tripura, April 28, 2020. (Str/Xinhua)